समृद्ध दाङ बनाउने अभिभारा नेकपाले पूरा गर्छ | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / अन्तर्वार्ता / समृद्ध दाङ बनाउने अभिभारा नेकपाले पूरा गर्छ
Posted by: युगबोध in अन्तर्वार्ता August 2, 2019	0 163 Views
ने पाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने कपा) का केन्द्रीय सदस्य तथा दाङ जिल्ला इञ्चार्ज
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दुई ठूला वाम पार्टीको एकताले बनेको छ। झण्डै डेढ वर्षअघि एकता घोषणा भए पनि जिल्ला र तल्लो तहसम्मको एकता पूर्ण हुन अझै सकेको छैन। केही दिन अघि मात्रै दाङको नेकपामा जिम्मेवारी बाडफाड भएको छ र तल्लो तहसम्म पार्टीलाई व्यवस्थित गर्न जिम्मेवारी तोक्ने कामलाई अघि बढाइएको छ। भर्खरै मात्रै जिल्लाको इञ्चार्ज र सह–इञ्चार्जको जिम्मेवारी पनि तोकिएको अवस्थामा दाङमा पार्टीको व्यवस्थापन, नेता, कार्यकर्ता परिचालन र सरकार सञ्चालनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय सदस्य तथा दाङ जिल्ला इञ्चार्ज जीवन गौतमसग युगबोधकर्मी जे.एन.सागरले गर्नुभएको कुराकानीको सारसंक्षेप यहा प्रस्तुत गरिएको छ। –सम्पादक
जिल्ला इञ्चार्जको जिम्मेवारी लिएपछि कार्यकाल कस्तो बनाउने योजना छ ?
नेपालको आजको आवश्यकताले र नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनले सामन्तवाद विरोधी राजनीतिक आन्दोलनलाई एउटा स्तरमा पूरा गरेर समाजवादको यात्रा शुरु गरिराखेको सन्दर्भमा सबै कम्युनिष्टहरु एक भएर समाजवाद निर्माणको दिसामा अगाडि बढ्नुपर्छ । हामीले लडेर परिवर्तन ल्याउने तर हामी लडेर अलग–अलग हुदाखेरी चाहि नेतृत्व प्रतिक्रियावादीहरुको हातमा जाने विगतदेखि जुन स्थिति बन्यो यसलाई क्रस गर्दै कम्युनिष्टहरुकै नेतृत्वमा यो परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने, देशलाई समृद्ध बनाउने र समाजवादमा जानका निम्ति पार्टी एकताको आवश्यकतालाई महसुस गरेर पार्टी एकता भयो। ढिलै भए पनि एक वर्ष पछाडि पार्टीका बा“की कार्यभारहरु पूरा गर्ने र केन्द्रीय सदस्यहरुको जिम्मेवारीहरु पूरा गर्दै जिल्ला र प्रदेशका सदस्यहरुको जिम्मेवारी पूरा गर्ने अभियानअन्तर्गत पार्टी सचिवालयले दाङको इञ्चार्जको जिम्मेवारी मलाई प्रदान ग¥यो। त्यसका लागि म सिंगो पार्टीको नेतृत्व, सचिवालयलगायत सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।
दोस्रो कुरा इञ्चार्जसहित सहइञ्चार्जहरुको पनि जिम्मेवारी दिइएको छ। दाङमा हामी दशजना केन्द्रीय सदस्यहरुलाई कार्यक्षेत्र दाङ तोकिएको छ। यसपछि लगत्तै दाङ जिल्ला कमिटीको बैठक सम्पन्न ग¥यौं। हामीले जिम्मेवारी बाडफाडहरु ग¥यौं। जिल्ला कमिटीमा विभिन्न जिम्मेवारी बाडफाड गरेका छौं। गाउपालिका, नगरपालिकाहरुका प्रमुख, उपप्रमुखहरुको जिम्मेवारीहरु बाड्यौं। त्यस्तै जनवर्गीय संगठनहरुको एकताका प्रक्रियाहरु तत्तत् संगठनका केन्द्रहरुले टुंग्याउने प्रयास जारी छ। नटुंगिएकाहरुको हकमा कार्यदल बनाएर हामीले जिम्मेवारी बाडफाड गरेका छौं। यो जिम्मेवारी बाडफाड गरिसकेपछि मेरो जिम्मेवारी दाङको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकतावद्ध र व्यवस्थितरुपमा अगाडि लिएर जाने र नेकपाको नेतृत्वमा दाङको पार्टी संगठनलाई मजबुत बनाउने, व्यवस्थित बनाउने मात्रै जिम्मेवारी छैन, त्यो स“गस“गै समग्र दाङको विकास, निर्माण र समृद्ध दाङ बनाउने जिम्मेवारी पनि मेरो नेतृत्वको सिंगो दाङको नेकपाको का“धमा आइपुगेको छ । यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न म प्रतिबद्ध छु । पार्टीका सबै नेता, कार्यकर्ताहरुलाई साथमा लिएर दाङको विकास निर्माण र दाङको पार्टी निर्माणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने मेरो सोच र योजना छ।
कार्यविभाजनलाई लिएर पार्टीभित्रै असन्तुष्टि आएका छन् । पहिलो गासमै ढुंगा लागेन र ?
हैन, स्वाभाविकरुपमा दुईवटा पार्टीको एकता भएर एक ठाउ“मा आइपुग्दा हिजो भएका ठूला कमिटीहरुलाई सानो बनाउनुपर्ने, हिजो पाएका जिम्मेवारीहरुबाट खुम्चिनुपर्ने स्थितिमा जॉ“दाखेरी कतिपय सन्दर्भमा खास्सखुस्स, कतिपय असन्तुष्टि व्यक्त भएको मैले सुनेको छु। तर अब शतप्रतिशत सन्तुष्टि हुनेगरी काम सक्दा राम्रै हुन्थ्यो। कतिपय सन्दर्भमा कमीकमजोरी भएका छन् भने ती कमजोरीहरुलाई सच्याउ“दै अगाडि बढ्ने हो। तर ती असन्तुष्टि पनि पार्टीका नेता, कार्यकर्ताहरुले गर्नुभएको हो। त्यो पनि पार्टीमा यसो गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो। यसो गरेको भए अझ व्यवस्थितढंगले पार्टीलाई, संगठनलाई अगाडि बढाउनु पथ्र्यो भन्ने आधारमा असन्तुष्टि आएका देखिन्छन् खासमा। दोस्रो कुरा कतिपय अपेक्षाहरु पूरा हुन सकेनन् होला। आगामी दिनमा हेर्नुस् पार्टी नेतृत्वले कतै गल्ती कमजोरी भएको छ भने त्यसलाई सच्याउ“दै अगाडि बढ्ने कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ। मलाई लाग्छ काम गर्नै नसक्नेगरी असन्तुष्टि आएको छ भन्ने होइन। भएका सानातिना असन्तुष्टिहरुलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ, आगामी दिनमा गरिन्छ।
कतिपय योग्य तर जिम्मेवारी दिन नसकिएकाहरुलाई पार्टी काममा कसरी परिचालन गर्नुहुन्छ ?
पहिलो कुरा त अहिलेको पार्टी एकता गर्दाखेरी नेकपाको जिल्ला कमिटीले निर्णय गरेरै जिम्मेवारी प्रदान गरेको हो। यसमा कुनै समस्या भएन। तर पनि हामी फेरि एकताको बाकी काम पूरा गर्ने अभियानअन्तर्गत हामीले गरेको हो। त्यसो हुदा हिजोको पूर्व माओवादीहरुले पूर्वमाओवादीको जिम्मेवारी बाडफाड ग¥यो । पूर्व एमालेअन्तर्गतको जिम्मेवारी पूर्व एमालेबाट भएको हो र दुबैतर्फबाट आएका जिम्मेवारी बा“डफा“डका विषयलाई एक ठाउमा ल्याएर हामीले जिम्मेवारी तोकेका हौं। मलाई के लाग्छ भने अहिले गरिएको कार्यविभाजनले असन्तुष्टिको ठूलो पर्खाल निर्माण गरेर काम गर्नै अप्ठेरो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। जो साथीहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ, उहा“हरुस“ग छलफलको प्रक्रिया अगाडि बढाएर उपयुक्त पात्रलाई उपयुक्त जिम्मेवारी दिने विधिअन्तर्गत नै अगाडि बढ्छ। अहिले एकताको एउटा विधिमा जानुपरेको हो। अब उपयुक्त पात्रलाई उपयुक्त जिम्मेवारी दिने र क्षमतावानहरुलाई जिम्मेवारी दिने, आवश्यकता भएकाहरुलाई जिम्मेवारी दिने, अग्रजहरुलाई जिम्मेवारी दिने यही विधिअन्तर्गत नै अगाडि बढ्ने हो। त्यसकारणले अहिले भएको असन्तुष्टि ठूलो होइन।
पार्टी एकताको बाकी काम कहिले सकिन्छ त ?
घोराही उपमहानगरपालिकालगायत केही पालिकाका वडाहरुको एकताको काम बा“की छ। त्यो कामलाई हामीले यही साउन महिनाभित्रै गर्ने निर्णय गरेका छौं। भदौ मसान्तसम्म पार्टी सदस्यताको नवीकरण, अभिलेखीकरण, त्यसपछि तल–तलसम्म पार्टीको राजनीतिक, वैचारिक प्रशिक्षणको अभियान, स्थानीय सरकारहरुलाई व्यवस्थित ढंगले अगाडि लैजाने, जनता, स्थानीय सरकार र पार्टीलाई जोडेर दाङको विकास निर्माणको काम अगाडि बढाउने योजनाहरुलाई हामीले अगाडि सारेका छौं। अहिले डेढ महिने अभियान तय गरेका छौं। त्यो समयभित्र यी सबै कामहरु हुन्छन्। डेढमहिनापछि फेरि भएगरेका कामको समीक्षा गर्दै फेरि नया“ कार्ययोजनासहित नया“ अभियान सञ्चालन गर्छौं।
पार्टी ठूलो तर काम भएनन् भन्ने जनगुनासो बढ्दैछ नि ?
पार्टी एकताको एक वर्ष तीन महिना बितिसक्दाखेरी पनि हामीले सम्पूर्ण एकताको प्रक्रिया टुंग्याउन सकेनौं। जसका कारणले केही समस्याहरु स्वाभाविकरुपमा पार्टी संगठनमा, जनताका काम गर्ने कुरामा, आमजनताका समस्या सम्बोधन गर्ने कुरामा निश्चितरुपमा समस्या पैदा भएका छन्। यी समस्याहरुलाई समाधान गर्नका निम्ति जिल्लाको बैठकले कार्यविभाजन गरेको छ। यसले जनता, पार्टी, स्थानीय सरकार र प्रदेश तथा केन्द्रीय सरकारस“ग जोडिएका कामहरु अगाडि बढाउने, समग्र दाङको समृद्धिको कुरा अगाडि बढाउने, जनताका दैनिक जीवनमा आउने समस्याहरुलाई समाधान गर्नका निम्ति पहलकदमी लिने योजना हामीले अगाडि सारेका छौं। यसले अबका दिनमा ती समस्या नआउने साथै जनताले गुनासो गर्ने दिन आउन नदिने कुरामा हामी प्रतिबद्ध छौं।
किसानले मलको समस्याबाट पार पाएनन् त खै ?
हो। कृषि मन्त्रालयले भारत र नेपाल सरकारस“ग सम्झौता गरेर सोझै मल ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढायो। तर त्यो प्रक्रिया समयमै अगाडि बढ्न सकेन। जसको कारणले गर्दा समयमै टेण्डर हुन सकेन। समयमै टेण्डर नह“ुदा समयमा मल आउन सकेन । समयमा मल नआएको कारणले जिल्लामा पु¥याउन नसकिएको कुरा सत्य हो। यो चाहि“ सरकारबाट कमजोरी भयो। यो हुनुह“ुदैनथ्यो भन्ने कुरामा म पनि सहमत छु। तर त्यति मात्रै कुराले किसानले मल नपाएको भन्ने चाहि“ होइन। दाङको रोपाइ गर्ने बेलामा मल नआएको भन्ने होइन। वीरगञ्ज र भैरहवामा मल आइसकेको थियो। तर ट्रक व्यवसायीहरुले आन्दोलन गरेपछि मल ढुवानी हुन नसकेको हो। नेकपाको दाङ इञ्चार्जको हिसावले कृषि मन्त्रीस“ग कुराकानी गरें। साल्ट टे«डिङको प्रमुखसग कुरा गरें। साल्ट ट्रेडिङकै भैरहवा प्रमुखसग पनि कुरा गरें। जिल्लाको प्रमुखस“ग कुरा गरें । प्रमुख जिल्ला अधिकारीसगसमेत कुराकानी गरेर फेरि संयुक्त छलफल पनि गरेकै हो। मल ढुवानी गरिदिनका लागि ट्रक व्यवसायी समितिलाई पनि आग्रह गरेका थियौं। तर उहा“हरुले ढुवानी गर्न मान्नु भएन। त्यसपछि हामीले त्यसको विकल्पको रुपमा सहकारीहरुलाई मल ढुवानीका लागि अनुमति दिने र उहा“हरुले ट्रेक्टरबाट आफै भैरहवा गएर मल ल्याउने व्यवस्था गरेका थियौं। जसअनुसार सहकारीहरुले मिनी ट्रक, टिप्पर, ट्रेक्टरमा भैरहवाबाट मल ल्याएर समस्या समाधान गरेका छौं। त्यसैले दुईवटै पाटोलाई हेर्नुप¥यो नि। नेकपाकै पहलमा जिल्लामा मल आयो र हाहाकार अहिले समाधान भएको छ। यद्यपि मलको समस्या आउ“दैन, छैन भन्ने चा“हि होइन। बरु सरकारले मलको समयमा व्यवस्थापन गर्न सकेन त्यो पनि हो। आएको मललाई ट्रक व्यवसायीहरुले ढुवानी गरिदिएनन् त्यो पनि सत्य हो र अर्को सत्य के हो भने पछिल्लो समयमा नेकपाकै पहलमा दाङमा मल आइपुगेको हो त्यो पनि सत्य हो।
जनताका काममा स्थानीय सरकारलाई पार्टीले सञ्चालन गर्न नसकेको हो ?
यसका दुई तीनवटा पाटा छन्। पहिलो कुरा के छ भन्दा संघीयताको नया अभ्यासमा हामी छौं। हामीले राजनीतिक परिवर्तनको एउटा कोर्ष पूरा ग¥यौं। राजनीतिक संक्रमणकाल संविधान निर्माणपछि सकियो। तर नया सरकार बनिसकेपछि अर्को संक्रमणकाल शुरु भयो। प्रशासनिक संक्रमणकाल। सरकार परिवर्तनको कुरा मात्रै थिएन। सिष्टम परिवर्तनको पनि थियो। हामी एकात्मक राज्य प्रणालीबाट संघीय राज्य प्रणालीमा गयौं। तीन तहका सरकार बने। सबैका आ–आफ्ना टिओआर छन्। तर जनताका अपेक्षा फरक छन्। प्रशासनिक ढंगले भन्नुहुन्छ भने कर्मचारी व्यवस्थापन अझै हुन सकिराखेको छैन। जनशक्तिको समस्या छ। अर्को कुरा के छ भने हामी नया“ प्रणालीमा गएको कारणले सिक्दै गर्दै जानुपर्ने अवस्था र समस्या पनि छ। अर्को पाटो भनेको पार्टी एकताको काम एक वर्ष ढिलो हु“दा हामीले एक वर्ष अगाडि लिनुपर्ने पहलकदमी थियो त्यो एक वर्ष पछि धकेलियो। अर्को कुरा स्थानीय सरकारहरुको सिर्जनात्मक ढंगले काम गरेर अगाडि बढ्ने कुरामा पनि पहलकदमी ठीकढंगले हुन नसकेको स्थिति पनि छ। अब पार्टीमा जुन जिम्मेवारीहरु बा“डफा“ड भएको छ। अब पार्टी, सरकार र कार्यकर्ताहरुलाई जोड्दै नया“ढंगले पहलकदमी लिन्छौं र जनताका अपेक्षाहरुलाई जतिसक्यो धेरै समाधान गर्ने ढंगले अगाडि बढ्छौं।
पार्टी व्यवस्थापनले राम्रो काममा प्रेरित गर्न सकिएन होला तर गलत गर्दा पनि चुइक्क बोल्दैन त पार्टी ?
तपाईंले भनेजस्तो छैन। स्थानीय सरकारहरुले काम गर्नै सकेनन् भन्ने आरोप पनि हामीले लगाउनुह‘“ुदैन। काम भइराखेका छन्। तर हाम्रो प्रवृत्ति के छ भने भएको कामको, राम्रो कामको चर्चा नहुने र नभएको कुरा बढी हाइलाइट गर्ने प्रवृत्ति छ। नभएको कुरालाई बढी फोकस गर्ने र निराशा फैलाउने ट्रेन्ड पनि हामीसामु छ। अर्को कुरा के हो भने संसारभरी भ्रष्टाचार छ। नेपालको सन्दर्भमा त झन ठूलो समस्या छ। यसलाई ठीकढंगले नियन्त्रण गर्न नसकेको कुरा सत्य नै हो तर पार्टीका तर्फबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रयास पनि भएका छन् । तर स्वाभाविकरुपमा पार्टीभित्र चेन अफ कमाण्ड भइनसकेको अवस्थामा ती हस्तक्षेपहरुलाई प्रभावकारी बनाउन नसकिएको होला तर पार्टीले केही गरेन , बोलेन भन्ने होइन। बरु नेता, कार्यकर्ताहरु शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, विकास निर्माणलगायत जनताका जीवनसग जोडिएका थुप्रै विषयमा पार्टीले आफूलाई जोडेर काम गरिरहेको छ। यसलाई थप बढोत्तरी गरेर जाने योजना अब पार्टीले बनाइसकेको छ।
स्थानीय सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाउन पार्टीको भूमिका के हुन्छ ?
जनताका दैनिक जीवनका समस्याहरु शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी, विकास निर्माणका कुराहरुलाई गुरुयोजना बनाएर सबै पालिकाहरुले बढाउन जरुरी छ। हामीले जितेका दाङका सातवटा पालिका, हाम्रा बहुमत भएका पालिकाहरुमा योजताबद्ध तरीकाले हस्तक्षेप गर्छ। पार्टीका तर्फबाट हामी सिंगो दाङको गुरुयोजना निर्माण गर्र्छांै। त्यो अन्तर्गत सम्बन्धित पालिकाहरुलाई उनीहरुका क्षेत्रभित्र पर्ने कामहरु उनीहरुलाई नै गर्न लगाउछौं। प्रदेशसग गर्नुपर्ने कामहरु प्रदेशलाई गर्न लगाउछौं आग्रह गर्छौं। केन्द्रबाट गर्ने कामहरु केन्द्रलाई आग्रह गर्छौं। स्थानीय परिचालनका लागि हामीले विभाग नै बनाएका छौं। हामीले विभिन्न फाटसग जस्तो कृषि, खानेपानी, वन, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका हाम्रा विभागहरु छन् ती विभागहरुले योजनताबद्धढंगले योजना अगाडि सार्नेछन्। ती सबै योजनाहरुलाई तत्तत् सरकारहरुबाट कार्यान्वयन गर्नका लागि हामीले पहलकदमी लिनेछौं।
तपाइ त शैक्षिक अभियन्ता पनि हो । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई यता न उताको अवस्थामा किन छोड्नु भो ?
पच्चिस शैøयाको महेन्द्र अस्पताललाई ५० शैøयाको बनाउने, त्यसपछि एक सय शैøयाको राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल बनाउने र त्यसलाई पनि राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने काममा म २०६३ सालदेखि नै जोडिए“। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने कुरामा नेतृत्व गर्ने अवसर पनि पाए“। मलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापनाको काम गर्नेगरी सहजकर्ताको जिम्मेवारी पनि दियो। ४५ दिनको बीचमा संसदबाट ऐन पास गरेर हामीले प्रतिष्ठान स्थापना पनि ग¥यौं। तर काम गर्न नेतृत्वमा भरपर्छ।
कस्तो नेतृत्व छ भन्ने कुराले संस्थाको विकास हुन्छ। असल नेतृत्व पर्दा काम असल हिसावले हुन्छ। असल नेतृत्व परेन भने असल चिज पनि खराब बन्दोरहेछ। जुन खालको नेतृत्व राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आयो र उसका जुन खालका हर्कतहरु देखापरे त्यो कारणले गर्दाखेरी जे समस्या देखा प¥यो, त्यो समस्या देखापरेपछि मैले सुधार गर्ने प्रयास गरें। तर सामाजिक संघसंस्था, राजनीतिक दलहरुको संयुक्त भेलाले सरोकार समिति बनायो र त्यसको नेतृत्व दाङ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नारायण भुसालले गरिरहनुभएको छ। साझा सहमतिमा समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी तोकिसकेपछि व्यक्तिगतरुपमा मैले सक्रियता देखाउनुपर्ने कुनै औचित्य हु“दैनथ्यो।
त्यसकारणले गर्दा मैले अझै जिम्मेवारी निर्वाह गर्छु भन्नुको तुक हु“दैन। साथीहरुले काम गरिरहनु भएको छ। यद्यपि समस्या छन्। १० वर्ष लगाएर जुनस्तरमा राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताललाई लिएर गएका थियौं । आज त्यो हिजोको महेन्द्र अस्पताल भन्दा तल्लोस्तरको सेवा सुविधा छ। भर्खरै मैले सुनें भएको साझा औषधि पसल पनि बन्द भयो रे। यो दुःखद् पक्ष हो। आमा सुरक्षा कार्यक्रम बन्द भयो, पोषण गृह बन्द भयो। यी सवै दुःखद् विषयहरु त छन् तर फेरि साझारुपमा जिम्मेवारी का“धमा आइपुग्यो भने म काम गर्न तयार छु।
यस्तो रिवेशमा एउटा अभियन्ताले आखा चिम्लेर बस्न सुहाउला र ?
हो। स्वाभाविकरुपमा दाङ जिल्लाको पार्टी इञ्चार्ज भइसकेको हिसाबले र त्यसको अभियन्ताको हिसाबले जिम्मेवारीबाट भाग्न पाउ“छु भन्ने त मलाई लाग्दैन। त्यस्तो पनि होइन, म अब केही गर्दैन। यो साझा विषय हो। व्यक्तिगतरुपमा मेरो मात्रै विषय होइन। साझाढंगले छलफल गरेर अगाडि बढ्न म तयार छु। यसलाई राम्रो बनाउनुपर्छ, बनाउन पनि सकिन्छ। अहिले यति नै भनौं।
दाङलाई शैक्षिक हब बनाउने अभियान कहा पुग्यो ?
म जति बेला निर्वाचनमा उम्मेदवार भए, त्यतिबेलादेखि नै मैले भन्दै गरेको हो, कि दाङ शिक्षाको केन्द्र बन्न सक्छ। शैक्षिक हब बन्ने सम्भावनालाई मूर्तरुप दिन अहिले पनि थुप्रै काम भइरहेका छन्। त्यसअन्तर्गत अहिले सबै पालिकाहरुमा प्राविधिक शिक्षा पुगेको छ। नेपालको नमूना जिल्लाभित्र पर्छ दाङ। जहा“ सबैभन्दा धेरै प्राविधिक शिक्षालय छन्। सबै पालिकामा प्राविधिक शिक्षाको पहुच पुगेको छ। त्यस्तै पाच नं. प्रदेशकै नमूना प्राविधिक शिक्षालय भनेर कृष्ण सेन इच्छुक बहुप्राविधिक शिक्षालय बनाउन सरकारले निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै बौद्धिक अपांगहरु र सबैखाले अपाङ्गता भएकाहरुलाई पठनपाठन गर्नेगरी बालमन्दिरलाई नमूना विशेष विद्यालय बनाउन सरकारले निर्णय गरेको छ। स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट मेडिकल साइन्सका सबै विधा पढाइको बाटो खुलेको छ। इञ्जिनियरिङको प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको छ। शिक्षा मन्त्रालयले त्यसको प्रक्रिया बढाइसकेको छ। त्यसको सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ। त्यसो ह“ुदा दाङमा प्राविधिक शिक्षामा इञ्जिनियरिङ पनि आइपुग्दा सबै विधामा अध्ययन गर्न सकिने केन्द्रको रुपमा दाङको विकास हुदैछ। बा“की त हामी दङाली मिलेर गर्ने हो। त्यसको नेतृत्व नेकपाले गर्नेछ। दाङलाई शैक्षिक केन्द्र बनाउने कुरामा नेकपा प्रतिबद्ध छ। नेकपाको जिल्ला इञ्चार्जका हैसियतले दाङमा आएका सबैखाले समस्या चाहे स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका समस्या हुन्, चाहे अरु समस्या हुन्। ती सबै नेकपाले समाधान गर्छ। नेकपा मात्रै यी सबै समस्या समाधान गर्ने ठाउमा छ।
Previous: महासंघलाई गैरजिम्मेवार निर्णय नगर्न सुुझाव
Next: करेन्ट लगाएर माछा मारे कारवाही